Fandraisana – Bokin-tsarin-tany misy ny karazan-tongolo gasy | tongolo gasy amidy
Bokin-tsarin-tany misy ny karazan-tongolo gasy
Mikasika an’ity vinavinan’asa ity
Ny tanjona amin’izao tranonkala izao dia ny hanangonana loharanom-baovao amin’ny antsipiriany mikasika ny karazana tongolo gasy maneran-tany sy ny mba handrafetana ny lisitr’ireo mpamatsy tongolo gasy hambolena sy hohanina amin’ny kalitao faran’izay tsara indrindra sy azo antoka
Zarao ary aelezo ny karazan – tongolo gasy misy aminao!
Mamboly karazan-tongolo gasy ve ianao amin’ny fomba fanao taloha sa ankehitriny? Mba handefaso sary izahay sy ny fanazavana mahakasika izany. Faly izahay hampiditra izany ao amin’ny bokin-tsarin-tany misy ny karazan-tongolo gasy.
Faly koa izahay raha ohatra ka afaka manome pepa, tsimoka, takamoa-na tongolo gasy maromaro aty amin’ny foibem-pambolenay ianao dia ho aelinay izany amin’ireo mpamboly sy mpitia tongolo gasy hafa. Bankin’ambioka sy zavamanirin’ny KPR